Wararka Maanta: Arbaco, Feb 20, 2013-Golaha Imaamyada Waqooyiga Amerika oo Cambaareeyay Dilkii dhawaan loo geystay Sheekh C/qaadir Gacamey (SAWIRRO)
Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar, oo ah gudoomiyaha Golaha Iimaamyada Waqooyiga Amerika, isla markaana isugu imaam ka ah masjidka Abuu-bakar Sadiiq ee magaaladda Minneapolis, oo kulankooda kaddib saxaafadda la hadlay, ayaa si kulul u cambaareeyey dilka loo geystay Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax, isagoo falkaasi ku tilmaamay in uu yahay mid aan xiriir iyo raad toona ku lahayn diinta Islaamka.
“Waxaan si wadajir ah u cambaareynaa dilkaasi loo geystay Sheekha, oo ay u geysteen dadka ka gardaran iyo gacan daalimadda ah,” ayuu yiri Sheekh Cabdiraxmaan.
Sheekha, ayaa ugu baaqay ummadaha muslimiinta ah in ay iska fogeeyaan guud ahaan falalka lagu bartilmaameedsanayo culumada diinta iyo dadka indheer-garadka ah ee bulshada ku leh saameynta muuqata, islamarkaana la doonayo in lagu dabar-gooyo.
“Waxaan halkaan ka qiraynaa in Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax (Gacamey), uu ahaa aabeheeni diinta iyo dacwada, dhimashadiisa kaddibna ay noo noqon doonto daliil iyo ku dayasho,” ayuu yiri Sheekh Cabdirisaaq Xaashi, oo isaguna ka mid ah culumada Soomaaliyeed ee Gobolka Minnesota, isagoo sidoo kalana sheegay in dadkii falkaasi geystay ama wax ka maleegayba ay ka habaari-doonaan xiliyada cibaadada iyo goobaha diinta.
Ugu dambeyn culumada ayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeeyey geerida naxdinta leh ee Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax, iyagoo dhinaca kalana ka codsaday Soomaalida iyo dadka kale ee Muslimiinta ahba in meel qura looga soo wada-jeesto kooxaha iyo shaqsiyaadka ku lugta leh dilalka mashaa’iiqda diinta.
15-kii bishaan Feebaraayo oo ahayd jimcadii la soo dhaafay, ayaa nin hubaysani waxaa uu masjid ku yaala magaaladda Garoowe ku dilay Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax (Gacamey), oo ka mid ahaa culumada sida weyn diinta loogu qadariyo dalka Soomaaliya, iyadoona aysan jirin cid wali sheegatay in ay ka dambeysay dilkiisa, walow si weyn farta loogu fiiqay Al-shabab, inkastoo ay kooxdu iyadu falkaasi dhinac isaga riixday.
Marar badan ayaa gudaha Soomaaliya horray dilal loogu geystay dad badan oo isugu jiray culumo diimeed iyo waxgarad, hase ahaatee dilkaan ugu dambeeyey ee loo geystay Sh. Cabdulqaadir Nuur Faarax ayey Soomaalidu si weyn uga naxday, iyadoona si wadajir ah meelo badan looga cambaareeyey.